कस्तो अचम्म ! डाक्टरले मृत घोषित गरेको आठ घण्टापछि जिवितै ब्युतिएपछि.. « Light Nepal
कस्तो अचम्म ! डाक्टरले मृत घोषित गरेको आठ घण्टापछि जिवितै ब्युतिएपछि..
Published On : 11 October, 2018 11:14 am
काठमाडौं, २५ असोज । गाउँका बुढापाकाहरुले मर्ने बेला यमदूत लिन आउने, आफूसँग मानिसहरु लगेको र फेरि उनीहरुलाई फिर्ता छाडिदिएको कथा सुन्नु भएको होला । यस्तै घटना भारतको गुरदासपुरको छिमेक इस्लामावादमा बिरोदेवीमा घटेको छ । यस घटनालाई देखेकाहरु यसबाट हैरान छन् ।
उठ्ना साथ बिरोदेवीले भनिन्,“मलाई गल्तीले लिएर गएका थिए । अर्को घरको महिलालाई लानु पर्ने मलाई लगेका छन्, म त स्वर्गको चक्कर लगाएर फर्किए । बिरोदेवीले दोहोराएर सास फेर्न थालेपछि उनलाई पुनः सिभिल अस्पताल लगियो । हाल पनि उनको त्यहाँ उपचार भइरहेको छ । महिला पुनः जिउँदै भएको खबरले उनको सहरमा सानो तिनो तरङ्गनै ल्याएको छ । मानिसहरु उनलाई हेर्न सिभिल अस्पताल आइरहेका छन् ।
बिरोदेवीको छोरी ज्योतिले बताए अनुसार सोमबार राती उनीहरुले आमालाई अस्पताल लिएर आएपछि डाक्टरले केही चेकअप गरे र बिरोलाई मृत घोषणा गरे । ज्योतिको भनाईमा उनको आमाको ईसीजीजस्तो कुनै टेस्ट गरिएन । सिभिल अस्पतालको हृदय रोग विशेषज्ञ डा। मनजिन्दर सिंह बब्बरका अनुसार ईसीजीको रिपोर्ट प्लेन नआएसम्म बिरामीहरुलाई मृत घोषित गर्न सकिँदैन ।
बिरोदेवी सुगरको बिरामी हुन् । उनी सिभिल अस्पतालमा पहिले पनि उपचारको लागि आइरहेकी थिइन् । त्यो दिन बिरोको शूगर लेबल एक्कास्सी कम भएर उनी बेहोस भएको हुन सक्छिन् । गुरदासपुरको सिभिल अस्पतालका सर्जन किशन चन्दले जिउँदो रहेकी महिलालाई मृत घोषित गरेको ममालामा एसएमओबाट जाँच हुने बताए । चन्दले यदी कोही डाक्टरबाट हेलचक्राई भएको पुष्टि भए कारबाही हुने बताए । एजेन्सी